Malunga nathi -Chengdu Dien Photoelectric Technology Co, Ltd.
Enkosi ngokukhetha DIEN TECH! Singumenzi wobuchule kunye nomthengisi wezinto ezisekwe kwikristale! Sijolise kwizicelo zabaxumi kwaye siziphucule ngokwethu ngokunika ingxelo enokuthi izise amava angcono okusebenzisana nathi. KWI-DIEN TECH, sinomdla kakhulu ekubandakanyeni iinkqubo zethu zophando kunye nokuphonononga iitekhnoloji ezintsha ezikhokelela kwinqanaba elitsha lesicelo kunye nabathengi bethu . Sihlala sifunda kwinto esiyenzileyo kwaye sizibekele ukwenza ngcono.Lapha kwi-DIEN, sikhetha iqela lethu elinemigangatho evulekileyo kwaye engqongqo, sinoGqirha abazibophezele ekukhuleni kwekristal ngaphezulu kweminyaka eli-12 kwaye basothuse kuthi nakule yethu. abathengi, sinabalingane abalungileyo ekuphulaphuleni nasekufundeni kwimisebenzi kwaye bazame ukutyeba amava abo ukuze baqonde ngcono abathengi.
-ULeon Lee CEO
Ukulungele ukufunda ngakumbi? Nxibelelana nathi namhlanje ngesicatshulwa sasimahla!
Njengenkampani enamandla yetekhnoloji ye-crystalline, i-DIEN TECH igxile kuphando, uyilo, ukwenziwa kunye nokuthengiswa kothotho lweekristali ze-nonlinear optical, i-laser crystals, i-magneto-optic crystals kunye ne-substrates. Umgangatho ogqwesileyo kunye nezinto ezinokhuphiswano zisetyenziswa ngokufayilweyo kwizenzululwazi, ubuhle kunye neemarike zeshishini. Ukuthengisa kwethu ngokuzinikela kakhulu kunye namaqela obunjineli anamava azimisele ngokuqinileyo ekusebenzeni nabathengi kubuhle nakwifayile yamashishini kunye noluntu lophando kwihlabathi liphela ngezicelo ezinomngeni.
Imveliso ihlangabezana nazo zonke iimfuno zemigangatho yaseYurophu kunye nehlabathi. Ngokusebenzisana ngokusondeleyo nabathengi bethu, I-DIEN TECH yenza ukuba iinjineli zenze impumelelo kwaye ziphuhlise izinto ezintsha eziphucula ukusebenza kwezicelo zazo. Ikomkhulu laseChengdu, China, DIEN TECH kunye neqela elinetalente kunye nabasasazi bayo baphuhlise abathengi kwihlabathi liphela, kubandakanya iUSA, iYurophu, iAsia, iAsia yoMzantsi. Ngokubhekisele kwikamva, I-DIEN TECH ayizukumisa inyathelo layo ukuya kwelinye lezona zinto zinokuthenjwa nezifanelekileyo abanikezeli bezinto zeefoto kwihlabathi.
I-DIEN TECH ezinikele ukwakha kuluhlu olubanzi lweemveliso kunye nezisombululo, isiseko sayo senkxaso emva kokuthengisa kunye nodumo olomeleleyo phakathi kwabathengi bayo. Kwaye ukuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zabathengi bayo kunye nokuphuhlisa izinto ezithembekileyo ezisekwe kuCrystal kunye nezixhobo.